करोडौंका स्वास्थ्य सामग्री चीनकै बाटैमा
काठमाडौं, ७ असोज । चीनसँगको नाका बन्द हुँदा कोभिड–१९ रोकथामका लागि प्रयोग हुने करोडौं मूल्यका स्वास्थ्य सामग्री बाटैमा अलपत्र छन् ।
कपिलवस्तुमा ३७ केजी चरेससहित २ महिला पक्राउ
कपिलवस्तु, ७ असोज । कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकामा प्रहरीले ३७ केजी चरेस बरामद गरेको छ । सुटकेस र शरीरमा लुकाएर ल्याउदै गरेको अवस्थामा २ महिला समेत पक्राउ परेका छन् ।
नेपाली भूमिमा चीनको दाबी, कथित राष्ट्रवादीहरु किन मौन ?
काठमाडौं, ७ असोज । छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले नेपाली भूमिमा संरचनासमेत निर्माण गरी आफ्नो रहेको दाबी गरेको छ । चिनियाँ पक्षले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ लिमी गाउँस्थित लाप्चामा नौवटा घर निर्माण गरिसकेको छ ।
नवलपरासीका बाढीपीडितका लागि टेन्ट हस्तान्तरण
नवलपरासी (बर्दघाट पश्चिम), ७ असोज । बाढीपीडितका लागि भारत सरकारले उपलब्ध गराएको टेन्ट र त्रिपाल नवलपरासी (बर्दघाट पश्चिम)मा नेपाल–भारत महिला मैत्री समाजले हस्तान्तरण गरेको छ ।
प्रदेश नं. २ मा प्रदेश युवा सम्मेलन २०२० भर्चुअल समारोह सम्पन्न
वीरगंज, ७ असोज । नेपाल युवा परिषद् मास्टरपीस एनवाईसी नेपाल, नेपाल युवा परिषद् प्रदेश नं. २ को संयुक्त आयोजनामा प्रदेश युवा सम्मेलन २०२० भर्चुअल सम्पन्न भएको छ ।
चिनियाँ अतिक्रमणविरुद्ध प्रदर्शन
रुपन्देही, ६ असोज । चिनियाँ पक्षले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ लिमी गाउँस्थित लाप्चामा नौवटा घर बनाएपछि देशको विभिन्न स्थानमा नेपालीहरुले विरोध गरेका छन् ।
भारतको सहयोगमा शिक्षा क्षेत्रमा भूकम्पपछिका पुनर्निर्माणबारेको परियोजना वेबसाइट सुरु
काठमाडौं, ६ असोज । भारत सरकारको सहयोगमा शिक्षा क्षेत्रमा भएका भूकम्पपछिका पुनर्निर्माण प्रयासहरुबारे तयार पारिएको सीबीआरआई परियोजना वेबसाइटको शुभारम्भ भएको छ ।
चीनको अनिच्छाका कारण रसुवागढी नाका सञ्चालन अनिश्चित
काठमाडौं, ६ असोज । चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढी सञ्चालन अनिश्चित बनेको छ । नाकामा काम गर्ने नेपाली मजदुरलाई कोरोना संक्रमण भएपछि बन्द भएको नाका सञ्चालन गर्न चीनले चासो दिएको छ ।
प्रशासनले वीरगञ्जमा तोक्यो प्याजको बिक्री मूल्य
पर्सा, ६ असोज । भारतले प्याजको निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपालमा त्यसको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर महँगो मूल्यमा बेचिरहेका व्यवसायीलाई पर्सा प्रशासनले कारवाही थालेको छ ।
काठमाडौं, ६ असोज । बंगलादेशबाट नेपालले पैंचामा मागेको मल नेपाल ल्याउन भारतले सहयोग गर्ने भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भूसाल र नेपालका लागि भारतीय राजदुत विनयमोहन क्वात्राबीच कृषि मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा राजदूत क्वात्राले यस्तो बताएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चीनले नेपाली भूमि कब्जा गरी भवन बनाएकोमा कांग्रेस नेता धनराजको आपत्ति
काठमाडौं, ६ असोज । नेपाली कांग्रेसका नेता धनराज गुरुङले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालका–६ लिमीको लाप्चा क्षेत्रमा चीनले नेपाली भुमीमा जबरजस्ती भवन निर्माण गरिरहेकोमा बिरोध जनाएका छन् ।
कोरोनाका कारण आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव स्थगित
काठमाडौं, ६ असोज । निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव स्थगित गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
सम्पूर्ण देवस्थलहरूमा सहज र सुरक्षित दर्शनका लागि तत्काल खुल्ला गर्न माग
काठमाडौं, ६ असोज । विश्व हिन्दु महासंघले सम्पूर्ण देवस्थलहरुमा सहज र सुरक्षित दर्शनका लागि खुल्ला गर्न/गराउन नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।
काठमाडौँ, ५ असोज । नेपाली यु–२३ फुटबल टोलीका खेलाडी राजेश परियारले भारतीय क्लबबाट फुटबल खेल्ने भएका छन् ।
काठमाडौं, ५ असोज । नेपालसँगको व्यापारमा चीन असहयोगी बनेको छ ।
नेपाली भूमिमा चीनले बनायो आफ्नो भवन
काठमाडौं, ५ असोज । चिनियाँ पक्षले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ लिमी गाउँस्थित लाप्चामा नौवटा घर बनाएको छ ।
काउन्सिलको कारबाहीमा परेका चिकित्सकहरुद्वारा पढाइने युसीएमएस खारेजीको माग
काठमाडौं, ५ साउन । मधेशी डक्टर्स एसोसिएसनले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कारबाहीमा परेका चिकित्सकहरुद्वारा पढाइने युसीएमएस खारेजीको माग गरेको छ ।
माछा पोखरीमा डुबेर आमासहित दुई छोरीको मृत्यु
मोरङ, ५ असोज । ग्रामथान गाउँपालिका–४ स्थित माछा पोखरीमा सोही ठाउँ बस्ने ३५ वर्षीया सिता अधिकारी र उनकै २ जना छोरीहरु १४ वर्षीया पवित्रा अधिकारी र ९ वर्षीया प्रितिका अधिकारीको डुबेर मृत्यु भएको छ ।
कपिलवस्तु, ५ असोज । बुद्धभूमि नगरपालिका–९ चौवन्नपुरमा बोलेरोको ठक्करबाट एक मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ ।
प्याजको कालोबजारी गर्ने दुई जना पक्राउ
मोरङ, ५ असोज । विराटनगर महानगरपालिका–९ स्थित पसलहरूमा बजार मूल्य भन्दा बढी दर राखी प्याज बिक्री गरी कालोबजारी गरेको अभियोगमा २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगन गर्न मुख्यमन्त्री राउतको आग्रह
काठमाडौं, ५ असोज । आधिकारिक ट्रेड युनियनको आगामी २४ गते हुने भनिएको निर्वाचन स्थगन गर्न प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मो.लालबाबु राउत गद्दीले आग्रह गरेका छन् ।
सर्लाहीमा तीन अर्ब बढीको तरकारी बिक्री
सर्लाही, ४ असोज । सर्लाही जिल्लाको लालबन्दीबाट आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा रु तीन अर्बभन्दा बढीको तरकारी बिक्री भएको छ ।
महोत्तरीमा दुई जनाको मृत्यु
बर्दिबास, ४ असोज । महोत्तरीको बर्दिबास–६ किसानगरमा पिकप र मोटरसाइकल एकआपसमा ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।
संविधानको ठाउँ ठाउँमा विरोध
वीरगञ्ज, ४ असोज । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले संविधान दिवसको विरोधमा वीरगञ्जमा प्रदर्शन गरेको छ ।
जसपा कार्यकर्ताबीच झडप
राजविराज, ४ असोज । संविधान दिवसको विरोधमा जनता समाजवादी पार्टीले शनिबार राजविराजमा गरेको कार्यक्रममा आसन ग्रहणको विषयलाई लिएर विवाद हुँदा कार्यकर्ताहरुबीच नै झडप भएको छ ।